Baarlamanka KMG Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ku leh magaalada Muqdisho. – SBC
Baarlamanka KMG Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ku leh magaalada Muqdisho.
Kulan lagu tilmaamay in uu yahay xasaasi ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku leh Baarlamanka KMG Soomaaliya, kulankaasi oo looga hadlayo heshiiskii magaalada Kambala ay ku gaareen madaxda dawlada KMG Soomaaliya.
Fadhigan Baarlamanka ayaa waxaa si wadajir ah u gudoominaya Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed & Gudoomiyaha Baarlamamka KMG Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaa sidoo kale goob joog ka ah Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas).
Kulanka ayaa ah mid albaabadu u xiran yihiin ayaa waxaa soo xaadirayn xildhibaano fara badan waxaana socota dood ku aadan heshiiskii Kambala oo keenay in uu daaqada dawlada ka baxo Ra’isalwasaarihii hore Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dadka arimaha siyaasada u dhoon daloola ayaa sheegaya in ay iska cadahay in heshiiskaasi ay qalinka ku duugayaan oo ay ansixin doonaan xildhibaanada Baarlamanka, maadama laga soo gudbay qodobkii ugu adkaa ee ahaa iscasilaadii Farmaajo oo noqon laheyd halxiraalaha ugu adah ee kulankaasi.